B ပိုး ။ C ပိုး နွင့္ အသဲကင္ဆာသမား မ်ားအတြက္ သတင္းေကာင္း !!!! – ရွှေအလင်း
B ပိုး ။ C ပိုး နွင့္ အသဲကင္ဆာသမား မ်ားအတြက္ သတင္းေကာင္း !!!!
တေစာင္းလက္ပ္(ေခၚ) ရွားေစာင္းလက္ပပ္ႏွင္႔ အသည္းကင္ဆာ
ထိုသို႔ရက္ရွည္လမ်ား ပစ္ထားေသာ္လည္း ညိွဳးေျခာက္မသြားပဲ တာရွည္ခံျခင္းမွာ ရွားေစာင္းလက္ပပ္အတြင္းသား ဂ်ယ္ရီတံုးကေလးမ်ား၏ အစိုဓါတ္ ကုိ ေရရွည္ထိန္းထားႏိုင္ေသာ ဂုဏ္သတၳိတို႔ေၾကာင္႔ျဖစ္သည္၊၊ ထို႔ေၾကာင္႔ ေရွးသမားအေက်ာ္တို႔က ရွားေစာင္းလက္ပပ္ပင္ကုိ မေသေဆးပင္ဟုလည္းေခၚၾကသည္၊၊ ေရွးအခါကပင္သမားေတာ္အေက်ာ္အေမာ္တို႔က မီးယပ္ေဆး၊ႏုနာေရာဂါ ေပ်ာက္ေဆးမ်ားအျဖစ္ ေဖာ္စပ္အသံုးျပဳခဲ႔ၾကသည္၊၊
စာေရးသူကုိယ္တိုင္လည္း ရွားေစာင္းလက္ပပ္ခ်က္ေဆး မီွ၀ဲေသာေၾကာင္႔ မည္သည္႔ေဆး၊ မည္သည္႔ဆရာ ၀န္ႏွင္႔မွွ ကုသရ်္ မေပ်ာက္ကင္းခဲ႔ေသာ အေဒၚျဖစ္သူ၏ လက္မွ ၾကြက္ႏို႔မ်ားႏွင္႔ တင္ပါးမွ ၀ဲေျခာက္မ်ား ေပ်ာက္ကင္းခဲ႔သည္႔အေၾကာင္းကုိ ကြ်ႏ္ုပ္၏ ပထမ စာအုပ္ျဖစ္ေသာ ”အသက္ကယ္ေဆးပင္မ်ား” ေရးသားေဖာ္ျပခဲ႔ဖူးေလသည္၊၊
ထို႔အျပင္ယင္းစာအုပ္ ႏိွဳက္ပင္ ရွားေစာင္းလက္ပပ္ကုိ မီွ၀ဲေသာေၾကာင္႔ ခႏၵာ ကုိယ္တစ္ခုလံုး ခံစားေနရေသာ ယားနာမ်ားႏွင္႔ ခုခံအားက်ဆင္း မႈေရာဂါပါ သက္သာလာခဲ႔ေၾကာင္း ေ၀ဒနာသည္တစ္ဦး၏ ကုိယ္ေတြ႔ကုိ ေရးသား ေဖာ္ျပခဲ႔ပါသည္၊၊ ရွားေစာင္းလက္ပပ္၏ ဂုဏ္သတၳိမ်ား ႏွင္႔ ေဆးအသံုးမ်ားကား က်ယ္၀န္းလွပါ၏။
အခ်ိဳ႔ ေသာ လူမ်ားမွာ ၀မ္းခ်ဳပ္ေရာဂါကုိ ႏွစ္ရွည္လမ်ား ခံစားေနရျပီး ၀မ္းႏုတ္ေဆးမီွ၀ဲမွ ၀မ္းသြားသျဖင္႔ ေန႔စဥ္ ၀မ္းႏုတ္ေဆးမီွ၀ဲေနသူမ်ားကုိ ကြ်ႏု္ပ္ ေတြ႔ခဲ႔ဖူး၏၊၊ ထိုသူမ်ားမွာ ေန႔စဥ္ ၀မ္းႏုတ္ေဆးမီွ၀ဲေနရေသာ ဒုကၡႏွင္႔အတူ ၀မ္းႏုတ္ေဆးမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေသာ ေပြးကိုင္းေၾကာင္႔ ၀မ္းသြားခါနီးတြင္ ၀မ္းဗိုက္ရစ္နာကာ အူနံရံမွ အက်ိအခြ်ဲ၊အေျမွးမ်ား ၀မ္းႏွင္႔ အတူ က်ဆင္းတတ္သျဖင္႔ အူမ်ားပါးလႊာတတ္ျပီး ၾကာလွ်င္ အူေရာင္ျခင္း ၊ အူတြင္ အနာေရာဂါ ျဖစ္ပြားျခင္းမ်ား ျဖစ္တတ္ေလသည္၊၊ ကနခို ပါ၀င္ေသာ ၀မ္းႏုတ္ေဆးမ်ားဆိုလွ်င္ ပိုရ်္ ပင္အႏၱရာယ္ မ်ားတတ္ေလသည္၊၊ထိုသို႔ ၀မ္းႏုတ္ေဆးစားမွ ၀မ္းသြားေသာ၊ ၀မ္းႏုတ္ေဆးကုိ ေန႔စဥ္ မီွ၀ဲေနရေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားအဖို႔ ရွားေစာင္းလက္ပပ္သည္ ေန႔စဥ္ မီွ၀ဲသင္႔ေသာ ေဘးထြတ္ဆိုးက်ိဳးကင္းသည္႔ ဓါတ္စာေဆး၀ါး တစ္မ်ိဳးျဖစ္ေလသည္၊၊
‘မခ်ိဳ ကအသည္းကင္ဆာျဖစ္ျပီးေတာ႔ ေရဖ်ဥ္းသံုးၾကိမ္စဲြတယ္၊၊ ဒီေတာ႔ အသည္းကင္ဆာအတြက္ေရာ ေရဖ်ဥ္းအတြက္ပါ ေသာက္ရတဲ႔ ေဆးေတြက မ်ားေတာ႔ မ်ားတာေပါ႔၊၊
ဒါေပမယ္႔ အသည္းေရာင္ အသား၀ါ ဘီပိုးႏွင္႔အသည္းကင္ဆာအတြက္ ေဆးတစ္မ်ိဳးကုိ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ေတာ႔ ရွားေစာင္းလက္ပပ္လို႔ ေျပာရမွာပဲ၊၊ ရွားေစာင္းလက္ပပ္ကုိအခံြႏြာျပီးအတြင္းကအႏွစ္ဂ်ယ္ရီကုိေန႔တိုင္းစားတယ္၊၊ရွားေစာင္းလက္ပပ္အခံြနဲ႔ ဂ်ယ္ရီၾကားက စိမ္း၀ါ၀ါအေရာင္၊ မုန္႔ခ်က္တဲ႔ အႏွစ္သားက ပိုျပီး အစြမ္းထက္တယ္၊၊မခ်ိဳကေတာ႔ ရွားေစာင္းလက္ပပ္ဂ်ယ္ရီ ေန႔စဥ္ မီွ၀ဲတယ္၊၊
သူက စီပိုးဘက္ကေန ကင္ဆာကုိ ကူးသြားတာ၊၊သူကအခု မႏၱေလးမွာေနတယ္ ၊သူ႔ရဲ႔ အသည္းေရာင္ အသား၀ါ စီပိုးေရာ အသည္းကင္ဆာပါ ရွားေစာင္းလက္ပပ္အႏွစ္ကုိ ေန႔စဥ္ မီွ၀ဲရင္းနဲ႔ပဲ သက္သာေပ်ာက္ကင္းသြားတယ္၊၊”’ ကႊ်ႏု္ပ္၏ အစ္ကုိ၀မ္းကဲြ၏ ဇနီးျဖစ္သူ အသည္းကင္ဆာ ေရာဂါျပင္းထန္စြာ ခံစားခဲ႔ရေသာ ၊ယေန႔ လူေကာင္းပကတိ ျဖစ္ေနျပီ ျဖစ္ေသာမခ်ိဳ ၏ သတင္းစကားမ်ားျဖစ္သည္၊၊
” က်ြန္မရဲ႔ အသိတစ္ေယာက္ အသည္းကင္ဆာျဖစ္တာ ရွားေစာင္းလက္ပပ္အ ႏွစ္ကုိ ျခစ္ျပီး ထန္းဖိုဦးထန္းလ်က္ရည္ေလးနဲ႔ ေရာျပီး ေန႔စဥ္စားတာ၊ အခုေတာ႔ အသည္းကင္ဆာ ေရာဂါ ေပ်ာက္ကင္းသြားပါျပီ၊၊ ”
တစောင်းလက်ပ်(ခေါ်) ရှားစောင်းလက်ပပ်နှင့် အသည်းကင်ဆာ
တစောင်းလက်ပပ်(ခေါ်) ရှားစောင်းလက်ပပ်ဟု ခေါ်လိုက်လျှင် ကွနု်ပ်တို့ မြန်မာပြည်တွင် မသိသူ မရှိလောက်အောင်ပင် လူသိများလှပါသည်၊၊ သို့သော် ရှားစောင်းလက်ပပ် ၏် အစွမ်းထက်လှသော ဂုဏ်သတ္ထိထူးများနှင့် ဆေးအသုံးကို ပြည့်စုံအောင် သိသူကား ရှားပါးလှပေ၏။
ရှားစောင်းလက်ပပ်ပင်ကို ကျွန်ုပ်မိဘများ၏ ဇာတိမြေ ဖြစ်သော အညာဒေသတစ်ဝိုက်တွင် သဘာဝပေါက်ပင် အဖြစ် ပေါများစွာ တွေ့နိုင်ပေသည်၊၊ရှားစောင်းလက်ပပ်ပင်သည် အပူဒဏ်ကို ကြံ့ကြံံခံနိုင်သော သဘာဝရှိသည့် ထူးခြားသော အပင်တစ်မျိုးဖြစ်သည်၊၊
အပင်၏ တစ်ဖက်တစ်ချက်တွင် လွှသွားကဲ့သို့ ဆူးလေးများ ပါရှိကာ အခွံ၏အတွင်းထဲတွင်တော့ အင်မတန် အေးမြ စိုစွတ်သော ရှားစောင်းလက်ပပ် အနှစ်ခေါ် ဂျယ်ရီအတုံးလေးများကို ထူးခြားစွာတွေ့ရလေသည်၊၊ရှားစောင်းလက်ပပ်၏ ထူးခြားချက်မှာ အပင်ကိုနုတ်ရျ် ရက်ပေါင်းများစွာ ပစ်ထားစေကာမူ အပင်သည် ညှိုးခြောက်မသွားပဲ ရှင်သန်နေသည်ကို အံ့သြဖွယ်ရာ တွေ့ရလေသည်၊၊
ထိုသို့ရက်ရှည်လများ ပစ်ထားသော်လည်း ညှိုးခြောက်မသွားပဲ တာရှည်ခံခြင်းမှာ ရှားစောင်းလက်ပပ်အတွင်းသား ဂျယ်ရီတုံးကလေးများ၏ အစိုဓါတ် ကို ရေရှည်ထိန်းထားနိုင်သော ဂုဏ်သတ္ထိတို့ကြောင့်ဖြစ်သည်၊၊ ထို့ကြောင့် ရှေးသမားအကျော်တို့က ရှားစောင်းလက်ပပ်ပင်ကို မသေဆေးပင်ဟုလည်းခေါ်ကြသည်၊၊ ရှေးအခါကပင်သမားတော်အကျော်အမော်တို့က မီးယပ်ဆေး၊နုနာရောဂါ ပျောက်ဆေးများအဖြစ် ဖော်စပ်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်၊၊
စာရေးသူကိုယ်တိုင်လည်း ရှားစောင်းလက်ပပ်ချက်ဆေး မှီဝဲသောကြောင့် မည်သည့်ဆေး၊ မည်သည့်ဆရာ ၀န်နှင့်မှှ ကုသရျ် မပျောက်ကင်းခဲ့သော အဒေါ်ဖြစ်သူ၏ လက်မှ ကြွက်နို့များနှင့် တင်ပါးမှ ၀ဲခြောက်များ ပျောက်ကင်းခဲ့သည့်အကြောင်းကို ကျွန်ုပ်၏ ပထမ စာအုပ်ဖြစ်သော ”အသက်ကယ်ဆေးပင်များ” ရေးသားဖော်ပြခဲ့ဖူးလေသည်၊၊
ထို့အပြင်ယင်းစာအုပ် နှိုက်ပင် ရှားစောင်းလက်ပပ်ကို မှီဝဲသောကြောင့် ခန္ဒာ ကိုယ်တစ်ခုလုံး ခံစားနေရသော ယားနာများနှင့် ခုခံအားကျဆင်း မှုရောဂါပါ သက်သာလာခဲ့ကြောင်း ဝေဒနာသည်တစ်ဦး၏ ကိုယ်တွေ့ကို ရေးသား ဖော်ပြခဲ့ပါသည်၊၊ ရှားစောင်းလက်ပပ်၏ ဂုဏ်သတ္ထိများ နှင့် ဆေးအသုံးများကား ကျယ်ဝန်းလှပါ၏။
ရှားစောင်းလက်ပပ်ဂျယ်ရီ(4)လက်မ၊ (5)လက်မ ခန့်ကို နေ့စဉ် မှန်မှန်မှီဝဲပါက တစ်လအတွင်းတွင် သွေးထဲ နှိုက်ရှိသော သကြားဓါတ်များ ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်ကာ ဆီးချို၊ သွေးချို ရောဂါ သက်သာ သွားမည်ကို စာဖတ်သူကိုယ်တိုင်သုံးစွဲကြည့်လျှင် ကိုယ်တွေ့သိရပေမည်၊၊
ထိုရှားစောင်းလက်ပပ်ဂျယ်ရီကို နှစ်ရှည်လများဆက်လက် မှီဝဲပါက ဆီးချို ၊ သွေးချိုကြောင့် ဖြစ်တတ်သော နောက်ဆက်တွဲ ရောဂါများဖြစ်သည့် အာရုံကြောအားနည်းခြင်း၊ မျက်စိအမြင်မှုန်ဝါးခြင်း၊ခန္ဒာကိုယ်ယားယံခြင်း၊ကျောက်ကပ်ပျက်စီးခြင်းဝေဒနာများကို ဟန့်တားကာကွယ် သက်သာပျောက်ကင်းနိုင်ပြီး ဆီးချို၊သွေးချို ရောဂါ များလည်း တဖြည်းဖြည်း သက်သာ ပျောက်ကင်းနိုင်သည်၊၊
ထို့အပြင် ရှားစောင်းလက်ပပ် အပေါ်ခွံကို ခွာရျ် အတွင်းသား အနှစ်ဂျယ်ရီ ကို နေ့စဉ် တစ်နေ့ တစ်ကြိမ် မှီဝဲပါက အူလမ်းကြောင်းမကောင်းရျ် ၀မ်းကောင်းစွာ မသွားနို်င်သော ၀မ်းချုပ်ရောဂါ သက်သာ ပျောက်ကင်းစေသည်၊၊ ထိုဝမ်းချုပ်ရောဂါ သက်သာ ပျောက်ကင်းသောကြောင့် ၀မ်းချုပ်ရောဂါ ၏ နောက်ဆက်တွဲ ရောဂါများဖြစ်သော လိပ်ခေါင်းရောဂါ၊ စအိုအိိမ်(အစာဟောင်းအိမ်) ကင်ဆာရောဂါများ ကာကွယ်ပြီး ဖြစ်လေသည်၊၊
ထို့ပြင်ဝမ်းချုပ်လျှင် အစားအသောက်ပျက်ခြင်း၊၀မ်းဗိုက် ရင်ခေါင်းတောင့်တင်းခြင်း၊အပူနှင့် လေတို့ ပေါင်းစပ်ရျ် ဥဏှ ၀ါ ယော အထက်သို့ ဆောင့်ကာ လေအထက်သို့ ဆောင်ကာ လေထိုး၊လေအောင့် ဖြစ်ခြင်း၊ကျောရင် ညှပ်ရျ် အောင့်ခြင်း၊ဇက်ကြောထိုးရျ် ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်ခြင်း၊အပူ အပုပ် အထက်သို့ဆောင်ရျ် သွေးတိုးခြင်း၊ ခေါင်းနောက်ရျ် ချွေးဆေးပြန်ခြင်း၊မျက်စိအမြင်ဝေဝါးရျ် မျက်စိမကြည်ခြင်း စသော ဝေဒနာမျိုးစုံခံစားတတ်ရလေသည်၊၊ရှားစောင်းလက်ပပ်ကို နေ့စဉ် မှန်မှန် မှီဝဲခြင်းဖြင့် ဆီး၊၀မ်း၊ လေမှန် အပူငြိမ်းကာ သွေးသားစင်ကြယ်ရျ် အထက်ပါ ဝေဒနာများကို ကာကွယ် ပြီးသားဖြစ်သည့် အပြင် ဝေဒနာခံစားနေရပါကလည်း ပျောက်ကင်းနိုင်ပေသည်၊၊
အချို့ သော လူများမှာ ၀မ်းချုပ်ရောဂါကို နှစ်ရှည်လများ ခံစားနေရပြီး ၀မ်းနုတ်ဆေးမှီဝဲမှ ၀မ်းသွားသဖြင့် နေ့စဉ် ၀မ်းနုတ်ဆေးမှီဝဲနေသူများကို ကျွနု်ပ် တွေ့ခဲ့ဖူး၏၊၊ ထိုသူများမှာ နေ့စဉ် ၀မ်းနုတ်ဆေးမှီဝဲနေရသော ဒုက္ခနှင့်အတူ ၀မ်းနုတ်ဆေးများတွင် ပါ၀င်သော ပွေးကိုင်းကြောင့် ၀မ်းသွားခါနီးတွင် ၀မ်းဗိုက်ရစ်နာကာ အူနံရံမှ အကျိအချွဲ၊အမြှေးများ ၀မ်းနှင့် အတူ ကျဆင်းတတ်သဖြင့် အူများပါးလွှာတတ်ပြီး ကြာလျှင် အူရောင်ခြင်း ၊ အူတွင် အနာရောဂါ ဖြစ်ပွားခြင်းများ ဖြစ်တတ်လေသည်၊၊ ကနခို ပါ၀င်သော ၀မ်းနုတ်ဆေးများဆိုလျှင် ပိုရျ် ပင်အန္တရာယ် များတတ်လေသည်၊၊ထိုသို့ ၀မ်းနုတ်ဆေးစားမှ ၀မ်းသွားသော၊ ၀မ်းနုတ်ဆေးကို နေ့စဉ် မှီဝဲနေရသောပုဂ္ဂိုလ်များအဖို့ ရှားစောင်းလက်ပပ်သည် နေ့စဉ် မှီဝဲသင့်သော ဘေးထွတ်ဆိုးကျိုးကင်းသည့် ဓါတ်စာဆေးဝါး တစ်မျိုးဖြစ်လေသည်၊၊
ရှားစောင်းလက်ပပ်၏ ထူးခြားသော နောက်ထပ်ဂုဏ်သတ္ထိတစ်မျိုးမှာ ခန္ဒာကိုယ်သွေးအတွင်း မြင့်မားနေသော Uric acid ကို ထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်း နှင့် Uric acid များသူများ စားသုံးလျှင် သွေးအတွင်း Uric acid လျှော့ကျရျ် ပုံမှန်ဖြစ်စေခြင်းဖြစ်သည်၊၊ ထို့ကြောင့် Uric acid များရျ် ဖြစ်သော ဒူးနှင့် ခန္ဒာအဆစ်အမြစ်တို့ ရောင်ရမ်းကိုက်ခဲစေသည့် (gout) ဂေါက်ရောဂါ မဖြစ်ပွားအောင် ကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်ခြင်းနှင့် ဖြစ်ပွားပါက ပျောက်ကင်းစေခြင်းပင်ဖြစ်သည်၊၊
ယခုဖော်ပြ သော အကြောင်းအရာများမှာ စာရေးသူ လက်လမ်းမှီသမျှ ရှားစောင်းလက်ပပ်၏ ဂုဏ်သတ္ထိများကို စာဖတ်သူများသို့ မျှ ဝေခြင်းဖြစ်ပါသည်၊၊
ယခုစာရေးသူဖော်ပြမည့် ကင်ဆာ ရောဂါနှင့် ပက်သက်ရျ် ရှားစောင်းလက်ပပ်၏ ဂုဏ်သတ္ထိထူးများမှာ အံ့သြဖွယ် ကောင်းလှပါသည်၊၊စာရေးသူ၏ အစ်ကို၊အစ်မဝမ်းကွဲ လူနာမိတ်ဆွေတို့၏ ကိုယ်တွေ့လေးများ မဖော်ပြမှီ ဂျပန်နိုင်ငံမှ ဆေးသုတေသန ပညာရှင်တစ်စု၏ စမ်းသပ်မှုများကို ဦးစွာဖော်ပြလိုပါသည်၊၊ ဂျပန်နိုင်ငံမှ ဆေးပညာရှင်တစ်စုသည် ကြွှက်များ၏ ခန္ဒာကိုယ်အတွင်းသို့ ကင်ဆာဆဲ(လ်)များကို ထိုးသွင်းလိုက်ပါသည်၊၊
ထိုသို့ ထိုးသွင်းလိုက်သော ကင်ဆာဆဲ(လ်)များသည် ကြွှက်များ၏ ခန္ဒာကိုယ်အတွင်းနှိုက် ပွားများလာပါသည်၊၊ထိုကဲ့သို့ ကြွှက်များ၏ ခန္ဒာကိုယ်အတွင်းမှ ပွားများလာသော ကင်ဆာဆဲ(လ်)များအတွင်းသို့ ရှားစောင်းလက်ပပ် သတ္ထုရည်(အနှစ်ရည်)ကို ထိုးသွင်းလိုက်သော အခါ ထိုရှားစောင်းလက်ပပ် သတ္ထုရည်များက ကြွှက်များကိုယ်တွင်းရှိ ကင်ဆာဆဲ(လ်) များကို ချေမှုန်းဖျက်စီးနိုင်ကြောင်း တွေ့ရှိရပါ၏၊၊
ထိုစမ်းသပ်မှု ရလဒ်အဖြေကြောင့် ရှားစောင်းလက်ပပ်ထဲတွင် ကင်ဆာရောဂါ ကို ကာကွယ် ကုသနိုင်သော ဒြပ်ပေါင်းပါ၀င်ကြောင်း အတည်ပြုကောက်ချက်ချခဲ့ပါသည်၊၊ သို့သော်လည်း လူကိုတော့ မစမ်းသပ်ရသေးကြောင်းသူတို့ကဆို၏၊၊ ဂျပန် နိုင်ငံမှ ဆေးသုတေသန ပညာရှင်များ၊ ဆရာဝန်များ လူကို မစမ်းသပ်ရသေးမှီ စာရေးသူ၏ ဆွေမျိုးနှင့် မိတ်ဆွေ လူနာများ၏ ရှာစောင်းလက်ပပ်နှင့် ပက်သက်ရျ် ကိုယ်တွေ့များက အံ့သြဖွယ်ကောင်းလှပေသည်၊၊
စာရေးသူ၏ အစ်ကို၀မ်းကွဲ တော်စပ်သူနှင့် ဇနီးသည်မှာ နှစ်ဦးစလုံး မန္ထလေးတိုင်းရင်းဆေးသိပံ မှ အောင်မြင်ရျ် တိုင်းရင်းဆေး ဒီပလိုမာ ရရှိခဲ့ကြသူများဖြစ်သည်၊၊ သူတို့ နှစ်ဦးစလုံး ကျောက်ပန်းတောင်းတွင် အခြေချ နေထိုင်ရင်း တိုင်းရင်းဆေးခန်း ဖွင့်လှစ်ထားလေသည်၊၊
လွန်ခဲ့သော လေး ၊ ငါး ၊ခြောက်နှစ်ခန့်က စာရေးသူအစ်ကို၏ ဇနီးဖြစ်သူ မချို မှာ အသည်းကင်ဆာရောဂါ ဝေဒနာ ပြင်းထန်စွာ ခံစားခဲ့ရပါသည်၊၊ သို့သော သေမည်ဟု ထင်ထားသော မချိုမှာ အသေပဲ ယခုအချိန်တွင် အသည်းကင်ဆာရောဂါ ပျောက်ကင်းသက်သာရျ် လူကောင်းပကတိဖြစ်နေပေပြီ၊၊ မချို ၏ အသည်းကင်ဆာ ရောဂါ သက်သာသွားပုံကိ စိတ်ဝင်စားလှသဖြင့် စာရေးသူ ကျွှနု်ပ်က မချိုထံသို့ ဖုန်းဆက်ရျ် မေးမြန်းကြည့်မိ၏၊၊
‘မချို ကအသည်းကင်ဆာဖြစ်ပြီးတော့ ရေဖျဉ်းသုံးကြိမ်စွဲတယ်၊၊ ဒီတော့ အသည်းကင်ဆာအတွက်ရော ရေဖျဉ်းအတွက်ပါ သောက်ရတဲ့ ဆေးတွေက များတော့ များတာပေါ့၊၊
ဒါပေမယ့် အသည်းရောင် အသားဝါ ဘီပိုးနှင့်အသည်းကင်ဆာအတွက် ဆေးတစ်မျိုးကို ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ ရှားစောင်းလက်ပပ်လို့ ပြောရမှာပဲ၊၊ ရှားစောင်းလက်ပပ်ကိုအခွံနွာပြီးအတွင်းကအနှစ်ဂျယ်ရီကိုနေ့တိုင်းစားတယ်၊၊ရှားစောင်းလက်ပပ်အခွံနဲ့ ဂျယ်ရီကြားက စိမ်းဝါ၀ါအရောင်၊ မုန့်ချက်တဲ့ အနှစ်သားက ပိုပြီး အစွမ်းထက်တယ်၊၊မချိုကတော့ ရှားစောင်းလက်ပပ်ဂျယ်ရီ နေ့စဉ် မှီဝဲတယ်၊၊
ရှားစောင်းလက်ပပ်အနှစ်ကိုကို နေ့စဉ်မှီဝဲလို့ အသည်းကင်ဆာ သက်သာ ပျောက်ကင်းတာ နောက်တစ်ယောက်ရှိသေးတယ်၊၊သူကတော့ မချိုသမီးရဲ့ သူငယ်ချင်းရဲ့ အဖေပဲ၊၊
သူက စီပိုးဘက်ကနေ ကင်ဆာကို ကူးသွားတာ၊၊သူကအခု မန္တလေးမှာနေတယ် ၊သူ့ရဲ့ အသည်းရောင် အသားဝါ စီပိုးရော အသည်းကင်ဆာပါ ရှားစောင်းလက်ပပ်အနှစ်ကို နေ့စဉ် မှီဝဲရင်းနဲ့ပဲ သက်သာပျောက်ကင်းသွားတယ်၊၊”’ ကျွှနု်ပ်၏ အစ်ကို၀မ်းကွဲ၏ ဇနီးဖြစ်သူ အသည်းကင်ဆာ ရောဂါပြင်းထန်စွာ ခံစားခဲ့ရသော ၊ယနေ့ လူကောင်းပကတိ ဖြစ်နေပြီ ဖြစ်သောမချို ၏ သတင်းစကားများဖြစ်သည်၊၊
ရှားစောင်းလက်ပပ်၏ အစွမ်းဖြင့် အသည်းကင်ဆာ ပျောက်ကင်းကြောင်း သတင်းစကားသယ်ဆောင်လာသူ နောက်တစ်ဦးကတော့ ဒေါ်သန်းသန်းဝင်း ဆိုသော အသက်(60)ကျော်အရွယ် အမျိုးသမီးတစ်ဦးဖြစ်သည်၊၊ ဒေါ်သန်းသန်းဝင်း က သူမ၏ မိတ်တွေ တစ်ဦး ရှားစောင်းလက်ပပ် အစွမ်းဖြင့် အသည်းကင်ဆာ သက်သာပျောက်ကင်းသွားပုံကို အောက်ပါ အတိုင်းပြောပြလေသည်၊၊
” ကျွန်မရဲ့ အသိတစ်ယောက် အသည်းကင်ဆာဖြစ်တာ ရှားစောင်းလက်ပပ်အ နှစ်ကို ခြစ်ပြီး ထန်းဖိုဦးထန်းလျက်ရည်လေးနဲ့ ရောပြီး နေ့စဉ်စားတာ၊ အခုတော့ အသည်းကင်ဆာ ရောဂါ ပျောက်ကင်းသွားပါပြီ၊၊ ”
ထိုသတင်းစကားကို သယ်ဆောင်လာသူ ဒေါ်သန်းသန်းဆိုသူမှာ လှိုင်သာယာ မြို့နယ် မင်းရဲကျော်စွာ လမ်းတွင်နေထိုင်သူဖြစ်သည်၊၊
ဂျပန်နိုင်ငံမှ ဆရာဝန်များ၊ဆေးသုတေသနပညာရှင်များသည် ရှားစောင်းလက်ပပ်သည် ကင်ဆာ ရောဂါ ကို သက်သာပျောက်ကင်းစေကြောင်း အစွမ်းသတ္ထိကို ကြွက်များဖြင့် စမ်းသပ်ပြီး လူကို မစမ်းသပ်မှီ စာရေးသူတို့ မြန်မာနိုင်ငံနှိုက် ရှားစောင်းလက်ပပ်၏ အစွမ်းကြောင့် အသည်းကင်ဆာ ရောဂါ ဝေဒနာ ပျောက်ကင်းသူ သုံးဦးခန့် ရှိပေပြီ၊၊ စာရေးသူ လက်လှမ်းမမှီသော၊ မသိရှိသော နေရာများနှိုက် ကင်ဆာရောဂါ ဝေဒနာသည် ဘယ်နှစ်ဦး သက်သာပျောက်ကင်းနေမည်ကို မသိရှိပါ၊၊
စာရေးသူကိုယ်တိုင်လည်း ကင်ဆာရောဂါ ဝေဒနာကို ကာကွယ်ရန်နှင့် ခံစားနေရသော ဆီးနှင့် ကျောက်ကပ် ရောဂါ ဝေဒနာသက်သာစေရန်အတွက် ရှားစောင်းလက်ပပ်ဂျယ်ရီကို နေ့စဉ် မှီဝဲလျက်ရှိပါသည်၊၊ ဘေးထွတ်ဆိုးကျိုး အင်မတန်နည်းပါးပြီး ရောဂါ ဝေဒနာပေါင်းစုံအတွက် အစွမ်းထက်လှသော ရှားစောင်းလက်ပပ်ကို နေ့စဉ်မှီဝဲမည်ဆိုပါက အကျိုးအနန္ထ ကျေးဇူးများလှကြောင်း တိုက်တွန်းရေးသားလိုက်ရပါသည်။
ေဝ သႏၲ ရာ ..ဓားဆြဲမယ့္ အျဖစ္… ႀကဳံေနရတဲ့ မႏၲေလး food box
“ေၾကာက္မက္ဖြယ္ေလယာဥ္ခရီးစဥ္မွာခ်စ္သူေတြျဖစ္သြားတဲ့ ေကာင္ေလးနဲ႔ ေကာင္မေလး”
“ေန႔ခင္းေၾကာင္ေတာင္ ဆိုင္ထဲဝင္ၿပီး ရက္ရက္စက္စက္သတ္သြားတဲ့ သာေကတလူသတ္မႈ...
အေမရိကန္ႏိုင္ငံက ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ေလ့လာခဲ့ၾကတဲ့...